NoLocation, yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Kwechinguva yakati wandei ikozvino, kuvanzika kwave chinhu chakakosha kune vazhinji vashandisi uye kana zvasvika pakutumira pikicha, kuratidza kuti varipi, vachinyora komendi ... vanofunga kaviri. Asi zvakare Iko kushandiswa kwemabhurawuza anotibvumidza isu kuti tibvise chero chiratidzo chebhurawuza redu chawedzera. Kana isu tave kuita paranoid padiki nepfungwa iyi, mushure mekutungamira hupenyu hweruzhinji kuzere, NoLocation inogona kunge iri yeimwe mafomu anotibatsira kuti tidaro. NoLotacion inobvisa iyo data renzvimbo kubva kumafoto atinotora, kuitira kuti zvisagone kuwana chaiko nzvimbo, zvakanyanya kana zvishoma, kubva kwatakatora.
NoLocation ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye1,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda zvachose mahara kuburikidza neiyi link yandinosiya panopera chinyorwa ichi. NaNoLocation, kwete ese mameseji manyorerwo anobvisa iyi data kana yakatsikirirwa isati yatumirwa, inobvisa ma GPS enzvimbo yenzvimbo iyi, sekureba sekunge isu takaita basa iri rinowanikwa muIOS kwemakore mashoma uye izvo zvakare zvinotibvumidza isu kuronga mifananidzo zvichienderana nenzvimbo yako.
Imwe yatinoona isu tabvisa iyo GPS data kubva kumifananidzo yedu, Kuburikidza neyekushandisa imwecheteyo tinogona kuigovana zvakananga kuburikidza nemaapplication ese atakaisa pane yedu kifaa, kunyangwe vari kutumira mameseji kunyorera, masocial network kana mapikicha edhita. Kuvhiya kwacho kuri nyore uye haudi ruzivo. Kunyangwe ichitaridzika kunge ishoma kwazvo mumabasa ayo, inoita zvainovimbisa uye vazhinji ndivo vashandisi vakagara vachitsvaga kunyorera kwerudzi urwu, iko kunyorera izvo zvinoenderana nemusimudziri kunowedzera mabasa matsva ane chekuita nenzvimbo. Tichafanirwa kumirira kuti tione kuti zvinotishamisa sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » NoLocation, yemahara kwenguva shoma